3#Ukusuka £30 Ensuite kitchenette Sky WiFi - I-Airbnb
3#Ukusuka £30 Ensuite kitchenette Sky WiFi
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguJacqui
Amagumbi amatsha ahlaziyiweyo kunye namagumbi amabini aneen-suite, iiTV ezinkulu ezinepakethe yeendaba ezinyulu ezinemidlalo yasebhakabhakeni kunye neWiFi yasimahla enikezelwa veki nganye kunye nokufikelela kwigumbi lokutyela kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Ibekwe kumbindi weCleethorpes, kufutshane nazo zonke izinto eziluncedo, iivenkile zalapha ekhaya, iivenkile zokutyela kunye neebhari kwaye kumgama omfutshane ukuya elunxwemeni.
Yintoni eyenza amagumbi ethu ahluke kwabanye. Baziqulathe ngokupheleleyo une tv enkulu enephakheji yemidiya enyulu ebandakanya imidlalo yasebhakabhakeni yasimahla yeWiFi enokusetyenziswa ngokupheleleyo kwekhitshi kumgangatho ophantsi one-oveni, isitovu kunye nempahla yokuhlamba impahla, ecociweyo kwaye yahlanjwa. kuxhomekeke kubude bokuhlala.
Kufuphi neevenkile zaseCleethorpes ezisembindini, iibhari, iindawo zokutyela, umphambili wolwandle, i-bowling alley kunye ne-cinema.
Umbuki zindwendwe ngu- Jacqui
Ndidibana nazo zonke iindwendwe xa ndingena kwaye ndiyaqhagamsheleka kwi-Mobile txt, i-imeyile nceda uqaphele ukuba ukungena kuphakathi kwe-4 & 7 pm phakathi kweveki, ngempelaveki ngedinga ngaphambi kokubhukishwa, ndizama ukuba bhetyebhetye kunye netshekhi ngamaxesha ukuba ndino-24 isaziso seeyure
Ndidibana nazo zonke iindwendwe xa ndingena kwaye ndiyaqhagamsheleka kwi-Mobile txt, i-imeyile nceda uqaphele ukuba ukungena kuphakathi kwe-4 & 7 pm phakathi kweveki, ngempelaveki…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cleethorpes